Sawirro:- Wasiirka warfaafinta Puntland oo Kormeer shaqo ku tagay Xarunta Radio Gaalkacyo | Puntland Vision
Sawirro:- Wasiirka warfaafinta Puntland oo Kormeer shaqo ku tagay Xarunta Radio Gaalkacyo
15 Luuliyo (Puntland Vision)— Wasiirka wasaarada warfaafinta dawlada Puntland Mudane C/raxaan Barkadle iyo Agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta ayaa maanta kormeer shaqo oo ugu guur galayeen xarumaha warbaahita iyo shaqada ay bulshada u hayaan ku tagay magaalada Gaalkacyo iyagoo gaaray xarunta Radio Gaalkacyo halkaas oo ay kula kulmeen qaar kamid ah hawlgadeenada shaqada ku jiray.
Wasiirka ayaa intii uu kormeerka ku marayey xarunta Radio Gaalkacyo wuxuu arkay raadad ka haray qaraxyo dhowr ah oo lala eegtay Idaacada Sadexdii Sanno ee lasoo dhaafay kuwaas oo waxyeelo kasoo gaartay qaar kamid ah shaqalaaha.
Wasiirka ayaa sheegay inay muhiim tahay inay Radio Gaalkacyo ay dawlada Puntland siiso ciidamo ilaaliya maadama horay waxyeelo loogu gaytay ayna kamid tahay xarumaha shacabka Puntland loogu adeego.
Wasiir C/raxaan Barkadle ayaa ugu danbayn wuxuu sheegay warbixinta Amniga iyo Baahiyaha idaacada inuu horgaynayo Golaha wasiirada sidoo kalana uu ka hadlayo xarumaha dawlada oo qaar kamid ah ay ka jiraan dayacaad sida uu sheegay wasiirka C/raxmaan.
Ugu danayn Agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta Mudane Mowliid Abkey ayaa sheegay inay u jeeda Socdaalkoodu uu salka ku hayey sidii ay u ogaan lahayeen xaalada idaacada iyo sidoo kale sidii waxlooga qaban lahaa baahiyo badan oo ka jira iyadoo ay weheliyeen Aas Qaran oo ka dhacaya Gaalkacyo kaas oo wasiir.
Hoos ka daawo Sawiradda Kormeerka Wasiirka.